Kenya oo u sheegtay si jees jees ah ineysan joojineyn duulimaadyada Soomaalida ee lagu baaro Gobalka Wajeer!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Kenya oo u sheegtay si jees jees ah ineysan joojineyn duulimaadyada Soomaalida ee lagu baaro Gobalka Wajeer!!
Kenya oo u sheegtay si jees jees ah ineysan joojineyn duulimaadyada Soomaalida ee lagu baaro Gobalka Wajeer!!
Dowladda Kenya ayaa sheegtay iney sii wadeyso Baaritaanadda lagu hayo Diyaaradaha ka ambabaxa Soomaaliya ee sii mara Wajeer oo ah dhulka Soomaalida ay Kenya Maamusho.
Arintan ayaa khilaafsan heshiis been ah afar bilood ka hor ku kala saxiixdeen Muqdisho madaxda labada dal kaasoo dhigayey in la fasaxo Qaadka Kenya ee la keeno Soomaaliya oo xiligaas xayirnaa, taas bedelkeedna Kenya ayaa saddex bilood gudahood ku joojisay duulimaadyada Soomaalida ee lagu baaro Wajeer.
Dowlada Soomaaliya aya markiiba fulisay heshiiskaas, iyadoo maalintaas maalintii xigtay Qaadka Kenya loo soo dhoofiyey Soomaaliya, balse Kenya oo saddexdii bilood ee ay qabsatay ay ku ekeyd 13-kii December ee sannadkii hore ayaan illaa hadda dhinaceeda ka fulin heshiiskaas.
Warar todobaadyo ka hor soo baxayey ayaa sheegayey in dowlada Soomaaliya ay qorsheyneyo iney mar kale hakiso Qaadka laga keeno Kenya si dowlada wadankaas ay ugu cadaadiso iney fuliso heshiiskii ay wada saxiixdeen balse illaa hadda ma jiro go’aan arintan la xiriira oo ka soo baxay dowlada Soomaaliya.
Kenya ayaa ka caga jiideysa iney fuliso heshiiskaas iyadoo ka faaiideysaneysa kala daadsanaata madaxda dowlada Soomaalida oo ku mashquulsan ololaha doorashada Madaxweynaha, kuwaas oo aan xiligan u soo jeedin iney ku mashquulaan arrimo kale.
Previous PostC/Raxmaan Faroole oo Ciidamo gaar ah la yimid Muqdisho iyo Layaabkii shalay ay sameeyeen! Next PostRaisul wasaare shaaciyey inuu xilka ka degayo, wiilkiisana xukunka ku wareejinayo (Daawo Sawirro)